लघुवित्तको १६ लाख कित्ता शेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन, कहाँबाट दिने आवेदन ? - Dainikee News::
लघुवित्तको १६ लाख कित्ता शेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन, कहाँबाट दिने आवेदन ?
काठमाडौं, पुस २९ । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले निष्काशन गरेको हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । लघुवित्तले १ बराबर १ अनुपात अर्थात् १६ लाख कित्ता हकप्रद शेयर मंसिर २३ गतेदेखि जारी गरेको थियो ।
लघुवित्तले गत वर्ष ४ करोड ७० लाख खुद मुनाफा कमाएको थियो ।
लघुवित्तले शेयर विक्री प्रबन्धकको रुपमा नबिल इन्भेष्टमेन्टलाई नियुक्ति गरेको छ । उक्त हकप्रद आश्वा प्रणलीमार्फत् जुनसुकै बैंकबाट तथा मेरो शेयरका प्रयोगकर्ताले इन्टरनेटमार्फत् समेत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
हकप्रद निष्कासन प्रयोजनका लागि कम्पनीले मङ्सिर ७ गते बुक क्लोज गरेकाले मङ्सिर ६ गतेसम्म शेयर किन्ने वा शेयर स्वामित्व कायम शेयरधनीहरुले यो शेयरको लागि आवेदन दिन सक्नेछन । इक्रा नेपालले यो हकप्रदलाई ग्रेड ४ प्लस प्रदान गरेको छ । यसले आधारभूत पक्षलाई कमजोर रहेको बुझाउँछ । तर, प्लस (+) चिन्हले तुलनात्मक हिसाबमा सकारात्मक स्थिति रहेको बुझाउँछ ।
नाडेपको धादिङको गजुरीमा मुख्य कार्यालय रहेको राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त कम्पनी हो । ४७ जिल्लामा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको गरेको लघुवित्तले कुल ८६ शाखामार्फत् आफ्नो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, पुस २९, २०७५ /Sunday, January 13th, 2019, 9:41 am